Love me like you do (20+) (Hiatus) - kookiebiscuit chocolatechip - Wattpad
Love me like you do (20+) (Hiatus)
Don&#x27;t bash me...
အရင်ရေးထားတာ နှမြောစရာကြီး 😔
EunHa ဗိုက်ကြီးထဲ အခန်းရောက်နေဘီဟာကို
ဘိူပြောရမန်းမတိအောင်ကို မိုက်ပေစွ  ဟီးး အုနီးး အားမွေးလိုက်ပါဦးလို့ ဆက်ရေးဖို့ pali naw
မျက်နှာတွေဘယ်နားသွားထားရမလဲတောင်မသိဘူuးnnieရေ but daebak…
omo 7ယောက်လုံးလူဆိုးလေးတွေလား JK ဘူ့ဆီ phဆက်မှာလဲ ကြောက်လိုက်တာ ဘာတေထပ်ဖြစ်ဦးမလဲ
Reply Get notified when Love me like you do (20+) (Hiatus) is updated Continue with FacebookContinue
#130 Fanfiction All Rights Reserved Report this story
You are my academic (18+ )
Kookie - ကျွန်မ secondyear scienceကျောင်းသူပါ
Tae - မဖြစ်နိုင်မှန်းမဖြစ်သင့်မှန်းလဲသိပါတယ်
Jin - သမီလေးကိုကြည့်ရတာဒီရက်ပိုင်းအတွင်း
Help Me To Choose One (On Hiatus)
အိမ် ငှား ကောင် မ လေး ၃ ယောက် ကောင် ချော လေး ၁၂ ယောက် နဲ့ က လေး လေး ၁ ယောက် ရှိ တဲ့ အိမ် ကို ရောက် လာ တဲ့ အ ချိန် မှာ ဘာ တွေ ဖြစ် ကြ မှာ လဲ?? xD
Ranking #638 in Fantasy (3.3.2017) 💓
မိဘတွေရဲ့သွေးကြွေးကိုဆပ်ရင်းအတ္တ မာနအငြိုးတွေနဲ့ ကလဲ့စားချေစိတ်သာကြီးစိုးနေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ ဓားစာခံ ဖြစ်သွားတဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ကောင်မလေး..... လောကကြီးအကြောင်း ဘာမှမသိသေးပါဘဲ အချစ်ဆိုတာစတင်ခံစားမိအချိန်မှာ ချစ်ရတဲ့သူကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့အနီးကပ်ရန်သူ ဆိုတာသိလိုက်ချိန်မှာ??????? အမုန်းတရားနဲ့ အချစ်လွန်ဆွဲပွဲမှာဘယ်အရာက အနိုင်ရသွားမလဲ????? ငယ်ငယ်တည်းက သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်နဲ့ချစ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ အမုန်းတရားကြားမှာ မွေးဖွား ခံရတဲ့ သူဌေးသမီးလေး .... နှစ်ယောက်တည်းက ဘယ့်သူကို နောက်ဆုံး သူရွေးချယ်မလဲ??????
Cure By love (20+)
သူ............Kim Jung kook
Arjushi (Hold me tight Book 2)
ဒီ fic က Hold me tight fic အဆက်​ပါ
Hold me tight တုန်းကလိုဘဲ အားပေးကြပါဦးနော်.....
Min Yoo Jim : ကျမဘဝမှာ အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး သူကလွဲပြီးဘယ်ယောက်ျား ကိုမှ စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး...သူ့အတွက်ဆို ကျမဘာမဆို စွှန့်ရဲတယ်....သူကတော့ ကျမကို ဂရု
စိုက်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ် တခုဘဲ စိုးရိမ်မိတယ် သူကျမကိုဂရုစိုက်လာတဲ့အချိန်... အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် သူ့နားမှာကျမ မရှိတော့မှာကို အကြောက်ဆုံးပါဘဲ..
Jung kook : အစကတော့ ကျနော် သူ့ကို အရမ်း မုန်းတယ်.. ဒါပေမဲ့ တဖြေးဖြေးနဲ့ သူ့နှလုံးသားကိုာ နားလည်လာတယ်.. ကျနော်သူ့ကို ရက်စက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရက်တိုင်းအပေါ် သည်းညီးခံခဲ့တဲ့ သူ့ကို သနားလာတယ်.. ပြီးတော့ လက်လွှတ်မခံနိုင်တော့တဲ့ အထိ ချစ်မိသွားတယ်.. ကျနော့်အချစ်က ရယူခြင်းများလား
Suga : သူမ တခြားတယောက်အတွက် နာကျင် ခံစားနေတဲ့အချိန်တိုင်း ကျနော့်ရင်မှာ ပူလောင်နေမိတယ်... သူနှလုံးသားထဲက မင်းသားလေးက ကျနော်သာဖြစ်လိုက်ချင်တယ်..
I'm gonna crazy (18+)
သူတို့ဆုံ​တွေ့ခဲ့ကြ​ပေမဲ့ ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို Jung Kookက မှတ်​မိ​ပေမဲ့ Ji Hye က အိမ်​မက်​လိုလို တကယ်​လိုလို မ​သေချာတဲ့အခါ...
တကယ်​လို့ Ji Hye က အဲ့ကိစ္စကို သိသွားတဲ့အချိန်​မှာ Jung Kook က သူ့​ဘေးမှာ အဲ့ကိစ္စ ဖြစ်​ပြီးထဲက အမြဲတမ်းရှိ​နေတာကို ကို ဘယ်​လို ထင်​သွားမလဲ?
Jung Kook က​ရော Ji Hye ထင်​သလို မဟုတ်​ဘူး ဆိုတာကို ဘယ်​လို သက်​​သေပြမှာလဲ?
ကျနော့်ဘဝလေးကငယ်ငယ်တည်းကအေးအေးချမ်းချမ်းလေးရှိခဲ့ပါတယ်..... ဒါပေမဲ့မိဘပေးစားလို့မိန်းမယူလိုက်ကာမှ ကျနော့်ဘဝဇောက်ထိုးတွေရောမိုးမျှော်တွေရော ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ.... ကျနော့်ရခဲ့တာမိန်းမအပြင် အပိုဆုအဖြစ် တလွဲတချော်အမြဲလုပ်တက်တဲ့ယောက်ဖခြောက်ယောက်ကိုပါ ထပ်စောင်းပြီးရခဲ့တယ်လေ.... ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် မင်္ဂလာဦးညမှာ တောင်ကျနော်နဲ့တူတူအိပ်ခဲ့တာ သူ့တို့ညီမမဟုတ်ဘဲ သူတို့ခြောက်ယောက်နဲ့လေဗျာ......
သူကကျမအတွက်ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဒ်ပါဘဲ  ကျမအကိုတွေဒုက္ခပေးသမျှကိုရင်စည်းပြီးခံခဲ့တယ်လေ.... တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သူပါ.... ကျမအတွက်တော့ သူက Good husband ပါဘဲ
Impure Love (20+)
-Vkook fic 20+
-Don't bash me!
-Wanna Bash?Please don't read!
Just For Jungkook (20+)
-Sleeping with Jungkook Part 2